IVideogiochi isasaza ngeCloud Gaming di yeStadia, iGeforce ngoku, iPlaystation ngoku ulator i-Emulator.online ▷ 🥇
Kude kube kutshanje, ukuze udlale umdlalo wevidiyo owuthandayo, bekufuneka uthenge ikhonsoli yomdlalo okanye usete i-PC yokudlala ebiza kakhulu, kwaye ugcine nemizobo eneenkcukacha ezandayo, kufuneka sihlaziye ikhompyuter rhoqo okanye siyithenge. ikhonsoli entsha phantse yonke iminyaka emi-3-4. Kodwa ngonxibelelwano olukhawulezayo lwe-Intanethi, indlela entsha yokudlala imidlalo yevidiyo sele iqalile ukubamba: imidlalo yelifu.
Umxholo wokudlala ngelifu awahlukanga kakhulu kwimidlalo ye-intanethi ekwi-Intanethi efumaneka kwi-Intanethi, umahluko wokuba ngala maqonga amafu kunokwenzeka namhlanje. dlala nemidlalo yevidiyo ehambele phambili (njengeCyberPunk 2077), efuna ngokubanzi iPC enekhadi lemizobo elinikezelweyo okanye ikhonsoli enjengePlaystation 4 okanye 5. Nokuba usebenzisa iPC eqhelekileyo kwaye ngaphandle kokuthenga nasiphi na isixhobo esikhethekileyoKe ngoko, inokudlalwa ngaphandle kweebhloko kunye nomgangatho ophezulu wegraphic, kuba izixhobo eziyimfuneko zokuqhuba umdlalo zibonelelwa ngamaseva anamandla akude, esixhuma kuwo nge-Intanethi ukufumana umdlalo weaudiyo / ividiyo kunye nokuthumela ungeniso lomyalelo.
Kwesi sikhokelo siza kukubonisa udlala njani kwi-Intanethi ngaphandle kwekhonsoli okanye iPC yokudlala Ukuthatha ithuba ngeenkonzo zokudlala zamafu ezifumanekayo e-Itali kwaye zifikeleleka ngokulula nangonxibelelwano lwe-Intanethi olungasebenziyo (ngokucacileyo, kuya kusoloko kufuneka siphephe ukunxibelelana kancinci okanye uqhagamshelo lwe-ADSL, ngoku engafanelekanga kwinkonzo ezininzi umnatha).
FUNDA OKANYE: Idlalwa njani imidlalo yePC kwiTV
Idlalwa njani imidlalo yelifu
Njengoko kukhankanyiwe kwintshayelelo, singadlala kwilifu kuphela ukuba sinonxibelelwano olungaqondakaliyo lwe-intanethi- phantse zonke iinkonzo yile nto ifunekayo (ngaphandle kweGeForce Ngoku) njenge kwenzeka ntoni kwiscreen sethu ngumsinga oxineneyo iyakwazi ukuphatha nayiphi na iPC nokuba ineminyaka esi-7 okanye nangaphezulu emagxeni ayo. Emva kokubona iimfuno, siza kukubonisa ukuba zeziphi iinkonzo onokuzisebenzisa e-Itali kwimidlalo yelifu kwaye zeziphi izixhobo ekucetyiswa ukuba uzisebenzise ukwenza amava ezemidlalo aphelele ngokwenene.
Inkqubo kunye neemfuno zenethiwekhi
Kwimidlalo yokudlala ilifu, sidinga umnxeba wasekhaya we-intanethi ngobhaliso olucwangcisiweyo (kungoko kungekho ntlawulo xa uhlawula njengoko uhamba okanye unxibelelwano olungenazingcingo) olunakho ukuhlangabezana nezi mfuno zilandelayo:
Isantya sokukhuphela: ubuncinci i-megabits ezili-15 ngomzuzwana (15 Mbps)
Isantya sokulayisha: ubuncinci i-megabits ezili-2 ngomzuzwana (2 Mbps)
I-WhistleNgaphantsi kwe-100 ms
Ukufumana esona siphumo silungileyo siphepha ukusetyenziswa konxibelelwano lweWi-Fi phakathi kwePC kunye nemodem kwaye sikhetha uqhagamshelo lwentambo ye-Ethernet: ukuba imodem ikude kakhulu nePC esifuna ukudlala kuyo, sinakookanye ukubheja Unxibelelwano lwamandla okanye kwi-5 GHz ye-Wi-Fi ephindayo ukuphucula uzinzo kunye nesantya sonxibelelwano. Ukuvavanya uqhagamshelo lwakho lwe-intanethi ekhaya kwaye ufumanise ukuba kufanelekile na kwimidlalo yelifu, sicebisa ukuba uvavanye isantya kuvavanyo lwethu "Uvavanyo lwe-ADSL kunye neFayibha: Isantya se-Intanethi silinganiswa njani?", apho kwanele ukuskrolela ezantsi kwiphepha kwaye ucofe iqhosha lokuvavanya ukuqala ukuze wazi kwangoko ukuba siyahlangabezana neemfuno ezimiselwe apha ngasentla.
Imidlalo yamafu ifumaneka e-Itali
Ukuba uqhagamshelo lwethu lwe-Intanethi lwanele ukuthatha ithuba lemidlalo yefu, sinokukhetha kwiinkonzo ezininzi ukuqala ukudlala kwi-Intanethi kwangoko ngaphandle kwekhonsoli nangaphandle kwePC yokudlala.
Inkonzo yokuqala sicebisa ukuba uzame Google Stadia, ifikeleleka kwiwebhusayithi esemthethweni kwaye isebenza ngesikhangeli seGoogle Chrome (ukuba sifakwe kwikhompyuter yethu).
Ngale nkonzo, kwanele ukuba neakhawunti kaGoogle kwaye ubhalisele umrhumo wenyanga we- € 9,99 ukuze udlale imidlalo emininzi kwangoko, nakweyakutshanje kakhulu, ngomgangatho ophezulu kakhulu wokuhambisa kunye nokuphendula komyalelo kwinqanaba eliphezulu ( enkosi kwiiseva zikaGoogle).
Ukuba sifuna ukuzisa uGoogle Stadia kwigumbi lokuhlala kunye nokudlala imidlalo kwiTV, sinokucinga ngokuthenga inyanda yeStadia Premiere Edition, enikezela istadi wifi isilawuli Yiyo I-Chromecast Ultra ukudlala efini kuyo nayiphi na i-TV.
QAPHELA: Ukuba uyafuna zama iStadia mahala kwaye uqinisekise ukuba uqhagamshelo lwakho lwe-intanethi lukhawuleze ngokwaneleyo ukusasaza imidlalo yevidiyo, ungakwenza oko ngaphandle kokubonelela ngekhadi letyala. Kufuneka ubhalisele iakhawunti yokulinga kwaye ngaphambi kokugqiba ubhaliso, sebenzisa ukhetho ukuvavanya inkonzo imizuzu engama-30. Okulandelayo, ibango lomnye wemidlalo yasimahla ebonelelwe yiStadia Pro kwaye uqalise ukudlala ukubona ukuba isebenza kakuhle kwiPC yakho.
Enye inkonzo esinokuyisebenzisa kwimidlalo yelifu yile GeForce NGOKU, Eqhutywa yiNVIDIA kwaye iyafumaneka kwiwebhusayithi esemthethweni.
Ngokurhuma kwinkonzo kunye nokukhuphela usetyenziso oluthile kwisixhobo sethu, siya kuba nakho ukudlala simahla ngaphandle kwemida kangangeyure enye ngosuku, kodwa ngokufikelela okugxadazileyo (kuya kufuneka sifumane indawo yasimahla kwiiseva); Ukudlala yonke imidlalo ngokukhawuleza, ngaphandle kokulinda kunye nomgangatho ophezulu wegraphic (ngokusebenza kweNVIDIA Ray Tracing), vele ubhalisele umrhumo we- € 27,45, oza kuhlawulwa rhoqo kwiinyanga ezi-6. Ukuze ukwazi ukudlala kukwakho neemfuno ezisezantsi zePC esetyenziswayo, kuba isicelo sisebenzisa ubuncinci bezixhobo zenkqubo: ukudlala kakuhle kwanele ukuba nePC ene4GB ye-RAM kunye nekhadi levidiyo elixhasa iDirectX 11, enje kubonwe kwiphepha leemfuno ezisemthethweni. Ukudlala ngokungakhathali kwangoko, sinokucinga ngokusebenzisa I-TV ye-NVIDIA SHIELD, I-HDMI dongle ekulungele ukuyisebenzisa kunye nemidlalo yefu kwaye iyafumaneka kwiAmazon engaphantsi kwe- $ 200.
Enye inkonzo elungileyo esinokuzama ngayo kwimidlalo yelifu yile PlayStation ngoku, enikezwe nguSony kwaye ifikeleleka kwiwebhusayithi esemthethweni.
Ngale nkonzo singadlala izihloko ezikhoyo kwiPS4 nakwiPS5 nakwiPC, konke ekufuneka sikwenzile kukhuphela usetyenziso oluthile lweWindows PC, ungene ngeakhawunti yakwaSony kwaye uhlawule umrhumo wenyanga (€ 9,99 nge inyanga). Ukuba sifuna ukudlala efini kwigumbi lokuhlala phambi kweTV, sinokusebenzisa iPS ngoku kwiPS4 Pro okanye kwiPS5, ukunqanda ukuthenga imidlalo kunye nokudlala kwi-Intanethi ngomgangatho ophezulu.
FUNDA OKANYE: Eyona JoyPads ilungileyo yePC
Ngokukhetha enye yeenkonzo zemidlalo yefu eboniswe apha ngasentla, siya kuba nakho ukudlala kwi-Intanethi ngaphandle kwekhonsoli kwaye ngaphandle kokuseka iPC yokudlala (ebiza kakhulu), ukuhlawula umrhumo wenyanga ohleliweyo, okanye ukuthenga ezinye izihloko kuqokelelo lobuqu. (kuGoogle Stadia). Ezinye iinkonzo zikhululeke ngokupheleleyo, kodwa zinexesha kunye nokusikelwa umda kwinqanaba lokuhamba, ngenxa yoko akusoloko kunokwenzeka ukuba udlale njengoko ubona ngeenkonzo ezihlawulelweyo. Ukuba uqhagamshelo lwethu lwe-Intanethi luyakuvumela oko, masizame imidlalo yelifu, kuba ngoku iiseva kunye nonxibelelwano olusetyenzisiweyo lukhulile ukuze lukwazi ukuhambisa amava onke emidlalo kwi-Intanethi, kuthintelwe zonke iingxaki ezinxulumene nezinto ezindala ( Ikhadi levidiyo alisebenzi okanye iPC ngokusebenza gwenxa).
Ukuba sithanda imidlalo yevidiyo, ungaluphosi uluhlu lwe eyona 60 imidlalo yasimahla yePC.